लालीगुराँस फुलको औषधिय गुणहरू ! - Yohosamachar
लालीगुराँस फुलको औषधिय गुणहरू !
April 4, 2020 April 5, 2020 योहो समाचार	0 Comments
यति बेला गुराँस फूल्ने मौसम सुरु भइसकेको छ । पहाडी क्षेत्रमा ढकमक्क गुराँस फुलेर जंगलनै हराभरा भएको होलान् । यो जंगलमा फुल्ने यस्तो फुल हो, जसको सौन्दर्यमा जो कोहि मोहित हुन्छन् ।
त्यसो त लाली गुराँस नेपालको राष्ट्रिय फुल पनि हो । त्यसैले यस फुलप्रति हाम्रो भावनात्मक प्रेम र सम्मान पनि छ । गुराँस हेर्नमा जति राम्रो छ, उत्तिकै गुणकारी पनि । गुराँसको जुस बनाउनेदेखि केहि औषधिय काममा पनि प्रयोग गरिन्छ । के यसको स्वास्थ्यबर्द्धक गुण तपाईलाई थाहा छ ?
प्राचिन समयमै आर्युवेदमा गुराँस फूलको प्रयोग हुँदै आएको छ । यो रातो, गुलावी, सेतो आदि रंगको हुन्छ । समुन्द्री सतहबाट १५०० देखि ३६०० मिटरको उचाईमा गुराँस पाइन्छ ।
– रातो रंगको गुराँस पोषकतत्वले भरिपूर्ण मानिन्छ । यसको औषधिय गुण पनि उत्तिनै छ । – गुराँसको जुस कलेजो, मृगौला जस्ता समस्यामा निकै उपयोगी हुन्छ । – हृदय रोगलगायत केहि गंभिर रोगमा समेत गुराँसको जुस सेवन गर्नु लाभदायक हुन्छ । – गुराँसको जुस बनाएर सेवन गर्दा हड्डीको दुखाई समेत ठीक हुन्छ ।
– उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका लागि पनि गुराँस उपयोगी मानिन्छ । – घाँटीमा कुनै खानेकुरा अड्किएको बेला गुराँस खानुपर्छ, ठीक हुन्छ । – गुराँस एउटा सिजनमा मात्र पाइने भएकाले अन्य बेला प्रयोग गर्नका लागि यसको फूललाई घाममा सुकाएर राख्न सकिन्छ । – धार्मिक मान्यता के छ भने, गुराँसको फुल घरको मू्ल ढोकामा सजाउँदा घरमा नकारात्मक उर्जा आउँदैन ।
← नेपालमा रहेकाे हिन्दुहरुकाे पवित्र धार्मिक स्थल श्री पशुपतिनाथकाे मन्दिर
ढोरपाटन शिकार आरक्ष →
Total Visit : 14213